Browser Wars: Safari ဆိုတာဘာလဲ? Internet Explorer သည် Firefox ကိုဆက်လက်ရှုံးသည်။ | Martech Zone
Browser Wars: Safari ဆိုတာဘာလဲ။ Internet Explorer သည် Firefox ကိုဆက်လက်ရှုံးသည်။
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 23, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အရွယ်အစားအပြည့်ကိုကြည့်ရန်ဇယားကိုနှိပ်ပါ။ စောင့်ကြည့်ရမည့် browser နှစ်ခုသည် Internet Explorer နှင့် Firefox တို့ဖြစ်သည်။ Internet Explorer ၏ထိုးဖောက်မှုလုံး ၀ ကျဆင်းနေပြီး Internet Explorer7၏ရှယ်ယာများကျဆင်းနေပုံရသည် အောက် Firefox
Safari သည် Windows ဈေးကွက်သို့ထိုးဖောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်ပင်သက်ရောက်မှုမရှိသေးပေ။ Safari ၏ပြproblemsနာများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ Lar Holm မှ download ပြုလုပ်ပြီး ၂ နာရီအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောချက်ချင်းရှက်စရာကောင်းသည့်လုံခြုံရေးပြareနာများဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရ၊ Internet Explorer နှင့်ပြtheနာမှာအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Internet Explorer အဖွဲ့၏ ဆက်လက်အဝိဇ္ဇာ CSS ကို စံချိန်စံညွှန်းများ။ ဤသည်မှာလူ ဦး ရေ၏အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပုံရသည်ဟုထင်ရသော်လည်းလူများသည်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့နှင့်စိမ်းကားနေအောင်ပြုလုပ်ရန်အရေးအကြီးဆုံးမှာ - developer များဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် Internet Explorer ကိုမုန်းသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းငါတကယ်သုံးတယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံရပြီးစာမျက်နှာ hack များကိုအကောင်အထည်ဖော်သောအခါထိုစာမျက်နှာများကိုပြန်ဆိုခြင်းသည်လှပသည်။ ငါ application ကို၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်ရုန်းကန်သော်လည်းအဖြစ်မကြာမီငါ menu ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားအဖြစ်။ ညာဘက်အပေါ်မီနူးများ၏ရယ်စရာ positioning ကိုအခြေခံအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမဆိုကြည့်ရှုပြီးမီနူးများအားလုံးကိုညာဘက်မဟုတ်ဘဲဘယ်ဘက်သို့နေရာချထားသည်။
ငါမကြာသေးမီက Vista ကိုဖွင့်တင်ခဲ့သည် ငါ့သားဘီလ်, screaming PC အသစ်နှင့်ငါပြောရမည်မှာအထူးသဖြင့် interface သည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်သည် Aero အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြေး။ Bill အတွက်ကျောင်း 2007 အတွက် Office XNUMX ကိုတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ် ဖဲကြိုး menu ကို system ကို။ အရာအားလုံးဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာအချိန်ယူရန်ကျွန်ုပ်အချိန်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီသည်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိကျစွာကိုယ်စားပြုသောစိတ်ကူးရုပ်ပုံများဖြင့်အလိုအလျောက်နေရာချထားသည်။
Microsoft ၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်ဤအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Internet Explorer အဖွဲ့သည်အကူအညီတောင်းခံရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်အံ့သြမိပါသည်။
GoDaddy က GoDaddy ထံမှဝယ်ယူထားသော Go-Daddy ဒိုမိန်းအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်
သြဂုတ်လ 23 ရက် 2007 ခုနှစ် 11:14 နာရီ
သင့်ဂရပ်ဖစ်တွင် မည်သည့်ကိန်းဂဏန်းများကို ကိုယ်စားပြုသနည်း။ အဲဒါ မင်းရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်လား။ ကိန်းဂဏန်းဆိုဒ်တစ်ခုလား။
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 12: 15 AM
ဤဒေတာအတွက် အရင်းအမြစ်ကား အဘယ်နည်း။
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 1: 13 AM
w3schools ကိန်းဂဏာန်းများသည် ဝဘ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သူများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဝဘ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သူများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်—အခြားလူဦးရေစာရင်းများထက် firefox မွေးစားနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသော Lifehacker မှတ်ချက်များကို မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုနေပါသည်။
ဌာနမှူး @ Technical Itch
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 2: 59 AM
ဝဘ်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်ကိုလည်း ကျွန်တော်ကြားဖူးတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် IE ကို ရှောင်လွှဲ၍မရသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် SharePoint ကဲ့သို့သော အခြားသော Microsoft ဝဘ်အခြေခံထုတ်ကုန်များကို စတင်အသုံးပြုသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် Firefox ကို အသုံးပြုပါသည်။
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 3: 32 AM
30 (ဇွန်လ) မှာ 2008% ကို ရည်မှန်းထားတယ်လို့ Mozilla Foundation က လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က ပြောခဲ့ဖူးတာကြောင့် ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက ဘယ်ကလာလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 7: 45 AM
ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက W3Schools. တောင်းပန်ပါတယ် ပို့စ်မှာ မပါခဲ့ဘူး ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ဒီမနက် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါတယ်။
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 10: 38 AM
ထိုကိန်းဂဏန်းများသည် ဝဘ်တစ်ခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီသည့်တိုင်အောင်၊ ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။ သင့်ဆာဗာ ကိန်းဂဏာန်းများကို သင်လည်း ထုတ်ဝေနိုင်သည်။
သြဂုတ် 24, 2007 မှာ 9: 41 AM
ဝဘ်ဆိုက်များစွာသည် Firefox နှင့် မသဟဇာတမဖြစ်သေးဟု သင်ယူဆသောအခါ ဤဇယားကိုမြင်ရသည်မှာ အံ့ဩစရာပင်။ Firefox အသုံးပြုသူ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား ရူးသွပ်စေသည်။
သြဂုတ်လ 24 ရက် 2007 ခုနှစ် 6:50 နာရီ
CSS လိုက်နာမှုမရှိသော IE6 အမုန်းခံ b/c သည် IE7 ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်သည်ကို Microsoft မှ စတိုင် ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန် အတော်လေး လျောက်ပတ်သော အလုပ်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ်ပင် အံ့အားသင့်မိပါသည်။ Update မှတစ်ဆင့် IE7 ကို Windows အသုံးပြုသူများထံ တွန်းပို့ရမည့်အချက်နှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် IE6 သည် ယခုအချိန်တွင် ကျဆင်းသွားလိမ့်မည် (ထို့ကြောင့် IE7 ထိုးဖောက်မှု အရှိန်အဟုန်ဖြင့်) ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု သင်ထင်မိပါသည်။
Chris Schmitt သည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသည့် စတိုင်လ်ရှုထောင့်မှ ဘရောင်ဇာနှစ်ခုရှိ မတူညီမှုများအကြောင်း တိုတိုတုတ်တုတ်စာတိုကို ရေးသားခဲ့သည်။ ဒီမှာ.
သြဂုတ်လ 27 ရက် 2007 ခုနှစ် 7:31 နာရီ
စိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်တော် ထည့်ပေးထားပါတယ် ထင်ရှားသော တွေ့ရှိချက်အချို့ကို လိုက်နာပါ။ စာဖတ်သူတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံသည်။
1:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 00 မှာ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက IE6 ရှယ်ယာဆုံးရှုံးမှုက IE7 မျှဝေတိုးတက်မှုကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တာပါ.. Firefox တိုးတက်မှုဟာ IE အသုံးပြုသူဟောင်းတွေဆီက လာတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖတ်သင့်သလား။ Firefox သည် IE4-5-6-7 ၏ အဆင့်မြှင့်တင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးအတွက် သစ္စာရှိအသုံးပြုသူများထက် IE အဟောင်းအသုံးပြုသူများကို သင်္ဘောခုန်တက်စေခြင်းသည် သဘာဝကျပါသည်။